Root လုပ်တယ်ဆိုတာ – MIUI Myanmar Fan Site
Home BLOG Root လုပ်တယ်ဆိုတာ	BLOG
Root လုပ်တယ်ဆိုတာဟာ ဖုန်းတွေမှာ ရှိတဲ့ စနစ်တွေကို သာမာန်အသုံးပြုသူ အဆင့်ကနေ ပိုမြင့်တဲ့ Administrator အဆင့်ရအောင် တစ်နည်း Super User ဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်
ဒါကို Super User Access သို့မဟုတ် Root Access လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဖုန်းတစ်လုံး Root ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ ဘာတွေ လုပ်လို့ရနိုင်ပါသလဲ။ ယေဘုယျ အားဖြင့်
အတွင်းပိုင်းမှာပါတဲ့ System App တွေကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ Font Change တဲ့ App လို Root Access လိုအပ်တဲ့ Application တွေနဲ့ စိတ်တိုင်းကျ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် .. MIUI China ROM လို Theme Font ပြောင်းလို့ရတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ ပြသနာ သိပ်မရှိလှပေမယ် Global ROM ဖြစ်သွားရင် ဒါမှမဟုတ် အခြားသော Theme Font မထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ Root Access လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သော ဂိမ်းတွေဆော့ရာမှာလည်း လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေ Crack ယူသုံးစွဲဖို့အတွက် Root လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုပဲရှိတာပါ Root Access ရသွားလို့ ကလိလိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်လာတဲ့ ပြသနာတွေကို ကိုယ်တိုင်ရှင်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် Logo မှာရပ်သွားတာတို့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ Dead သွားတာတို့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါ့အပြင် မလိုလားအပ်တဲ့ App တွေဟာ ကိုယ့်စနစ်ကို စောင့်ကြည့်နေနိုင်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အားနည်းချက်တွေ ဟာပေါက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မလိုအပ်ရင် Root မလုပ်ဖို့ အကြံပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။
Previous article Mi Band2နှင့်ပက်သက်၍ အမေးအဖြေများ	Mee Net (Bago)	Just Simple	More By Mee Net (Bago)	More In BLOG Mi Band2နှင့်ပက်သက်၍ အမေးအဖြေများ	(၁) Mi Band2ကဘာဖြစ်လို့ Battery အကုန်မြန်နေတာလဲ – Battery အစားထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်လ…
Mi ကိုဝယ်တော့မှာလား ? ဝယ်လာလို့ စသုံးဖြစ်ပြီလား ? ဝယ်မယ့်သူကိုပြန်ရှင်းပြဖို့လား ?	– ဖုန်းမှာ အဓိက Model နှစ်မျိုးက Mi နဲ့ Redmi ပါ။ Mi ကတော့ Spec မြင့်သလို စျေးမြင့်ပ…
Load More By Mee Net (Bago)	Mi Band2နှင့်ပက်သက်၍ အမေးအဖြေများ	(၁) Mi Band2ကဘာဖြစ်လို့ Battery အကုန်မြန်နေတာလဲ – Battery အစားထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်လ…
(၁) Mi Band2ကဘာဖြစ်လို့ Battery အကုန်မြန်နေတာလဲ – Battery အစားထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်လ…